Waraana Tophiyaan labsite – Maaltu ta’a? – Awash Times
Waraana Tophiyaan labsite – Maaltu ta’a?
November 4, 2020 Malka Wabe Uncategorized Leave a comment
Tophiyaan adda waraanaa hedduudhan ummata ofiirratti waraana bantee jirti. Waggaa lama dura ABO fi WBO irratti, ji’a afur dura ifatti ummata Oromoo guuturratti. Kaleessa gaafa 03.11.2020 MN Tigray irratti mootummaan nafxanyaa kan Abiy Ahmed hogganamu waraana bane jira.
Waraanni kuni kan Tophiyaa fi ummata Tophiyaa osoo hintaane mootummaa Nafxanyaa kan MN Amaraa qofaan deeggaramutu maqaa mootummaa Tophiyaatin waraana bane.
Gaafa WBO iratti waraana banan J. Birhane Juulaa ji’a lama keessatti xumrra jedhee dhaadatee ture. WBO meeshaa gahaa hinqabnee bajata gahaa hinqabne kunoo moo’uu dadhabanii waraanni dhufee funyaa Finfinnee jala jira. Waraana ummata Oromoo irratti ajjeechaa Hacaalutiin walqabatee banames kunoo ji’oota afur ummata fixaa turanis homaa too’achuu hindandeenya. Guyyaa guyyaan biyyattiin diigamaa dhufte. Kaleessa immoo MN Tigray irratti waraana bananii jiru. Waranaa MN Tigray irratti kan labse Tophiyaa osoo hintaane mootummaa Ertiraa fi MN Amaaraa kan maqaa mootummaa Tophiyaatin socho’u. Kanaaf waraannis kan baname daangaa Tigray fi Amaaratiini.
Maal ta’uu danda’a?
Mootumma Tophiyaa jeequmsa guddaa keessa jira, kan humnaan qabanii ergame malee waraanni kuni deeggarsa biyyaa hinqabu. Deeggarsi inni qabu mootummaa Ertiraa fi MN Amaaraa qofarraati.
Tigray warra lola beeku. Wagga digdamaa oliif gaafa diinagdeef human hamma har’aa kana hinqabneeyyuu lolani Dargii moo’an. Lafti isaanii waraanaf kennataadha, sirriitti beeku. Meeshaa waraanaa biyyattii harka 80% fi jajjabaan isaan harka jira.
Waraanni kamtuu akka salphaatti yeroo gabaabaa keessatti hinxumuramu. Yeroo dheeraa fudhata. Waraana yeroo dheeraa gaggeessuf diinagdee biyya Tophiyaas ta’ee kan Ertiraa hindanda’u. Addunyaan deeggarsa Tophiyaa irraa kutti. Ummannis fincila kaasaa, diinagdee dadhaba deema. Waraanni diinagdee guddaa gaafata. Lubbuu nama kumaatamootaa dabalatee Daqiiqaf sekondiidhan qabeenya miliyoona hedduutu gubata.
Qabxiilee 1 fi lama walibira qabnee qabxii sadaffaadhan yoo herregnu waraanni kuni Abiy Ahmed mootummaarraa kufee, Ertiraanis salphattee, Tigray akka haaratti Finfinnee dhufuu malti. Sababiin isaatis ummanni Tophiyaa muraasa malee mootummaa kana jibbee waan jiruuf.
Ummanni Oromoo fi sabaaf sablammoonni waraanni kuni kan isaan laallatu waan hintaanef naatoo ummata Tigray agarsiisan malee itti hirmaachuu hinqaban. Biyya ofii, qeyee ofii jabeessuf mootummaa PP ofirraa fonqolchuutti carraa kanatti fayyadamuu qabu.
Herregni isaa 1#2/3= 4#5
Previous Post: Congress of the US have urged state department on Ethiopian situation
Next Post: ኢትዮጵያ ያወጀችው ጦርነት ፡ ወዴት ያመራል?